Nanome rariny ireo mpanao gazety Makedoniana voaheloka noho ny fanalam-baraka ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Efa namoaka didy mamely ireo mpanao gazety ny fitsarana Makedoniana
Voadika ny 23 Avrily 2022 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, English, Español, English
Ny Fitsarana Eoropeanina ho an'ny Zon’olombelona any Strasbourg. Sary avy amin'ny mpisera Wikipedia CherryX, CC BY-SA 3.0.
Navoakan'ny Meta.mk tany am-boalohany ity tantara ity. Navoaka eto indray ny dika nasiam-panovana araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty eo amin'ny Global Voices sy ny Metamorphosis Foundation.
Namoaka didy manome rariny ireo mpanao gazety roa avy amin'ny Fokus, gazety mpivoaka isan'andro ao Makedonia Avaratra ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona (ECHR), izay mamaritra fa nanitsakitsaka ny zon'izy ireo sy ny fahalalahan'izy ireo maneho hevitra ny fitsarana eo an-toerana tamin'ny filazana azy ireo ho meloka tamin'ilay raharaha fanalam-baraka nanenjehan'i Sašo Mijalkov, lehiben’ny sampam-pitsikilovana tany Makedonia tamin’izany fotoana izany azy ireo.
Nilatsaka ny didim-pitsarana tao Strasbourg rehefa namoaka didy ny fitsarana Makedoniana tamin'ny taona 2014 sy 2015 fa tsy maintsy niara-nandoa vola 9.000 euros mahery ny tonian'ny gazety Focus Jadranka Kostova sy ilay mpanao gazety Vlado Apostolov ho onitra ho an'ny talen'ny Fitantanana ny Fiarovana sy Mpitsikilo Fitsikilovana teo aloha, Sašo Mijalkov, noho ny fanalam-baraka sy fanevatevana.
Araka ny didim-pitsarana Strasbourg, nivoaka tamin'ny 5 Aprily 2022, nandika ny Andininy faha-10 — momba ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny Fifanarahana Eoropeana momba ny Zon'olombelona ny manampahefana ara-pitsarana ao Makedonia, ary nomena onitra noho ny fahavoazana tsy ara-bola ireo mpitory, 3.000 euros ho an'ny tonian-dahatsoratra Kostova ary 1.250 euro ho an'i Apostolov mpanao gazety, araka ny tatitra avy amin'ny Fikambanan'ny mpanao gazety ao Macedonia (AJM).
Ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazetiboky Fokus, Jadranka Kostova sy ny mpanao gazety Vlado Apostolov nivoaka ny fitsaràna tamin'ny Mey 2013. Pikantsary tamin'ny lahatsary avy amin'ny A1on.mk.
Nametraka fangatahana tany amin'ny ECHR tamin'ny taona 2016 ny Biraon'ny Lalàna Medarski solontenan'ny mpanao gazety avy ao Skopje rehefa nohamafisin'ny fitsarana rehetra ao an-toerana ny fanamelohana, manery azy ireo hiaraka handoa onitra 9.000 euros mahery ho an'ny iray amin'ireo olona matanjaka sy manankarena indrindra ao amin'ny firenena, zanak'olo-mpiray tampo amin'ny praiminisitra tamin'izany fotoana izany Nikola Gruevski.
Nametraka ny onitra ho an'ireo mpanao gazety ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin'ny fiandohan'ny taona 2014, nanamafy ny didy tamin'ny Septambra 2014 ny Fitsarana Ambony, ary nandà ny fampakaran'ny mpanao gazety tamin'ny Novambra 2015 ny raharaha ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana.
Gazety mpivoaka isan'andro, Fokus manasongadina ny fanambaran'ny masoivoho teo aloha Ilievski miampanga an'i Mijalkov noho ny fanerena. Sary avy amin'ny NovaTv, nahazoana alalana.
Navoaka tamin'ny volana Janoary 2013 tao amin'ny gazety Focus mpivoaka isan'andro ireo lahatsoratra ireo, nikatona ilay gazety telo volana taty aoriana, taorian'ny nahafatesan'ilay mpamoaka lahatsoratra Nikola Mladenov niteraka resabe. Ireo lahatsoratra ireo dia nahitana fanambarana nataon’ilay Ambasadaoro Makedoniana teo aloha tany amin'ny Repoblika Tseky, Igor Ilievski, izay nilaza fa nandositra ny Repoblika Tseky izy noho ny faneren'i Mijalkov.
Tamin'ny taona 2014, nilaza ny AJM fa manitsakitsaka tanteraka ny fahalalahana maneho hevitra ary manakivy ny mpanao gazety tsy hanoratra momba izay mety ho fanararaotam-pahefana ny fanapahan-kevitr'ireo mpitsara Lidija Dimchevska, Stanka Zafirovska, ary Enver Bexheti , raha toa ka ambony loatra sy tsy mifandanja ny fanonerana ho an'ny fahavoazana tsy ara-bola. Nilaza izy ireo tamin'ny fanambaran'izy ireo hoe:
Nampiakatra ny raharaha ny AJM avy eo fa nampiditra fomba tsy azo ekena amin'ny fanamelohana mpanao gazety noho ny fanalam-baraka tamin'ny fanambarana nampitaina ny fitsarana. Raha misy mpanao gazety manamarina ny zava-misy amin'ny fanambarana tsirairay, araka ny notakian'ny fitsarana, dia tsy tokony havoaka ny ankamaroan'ny fanambarana ampahibemaso.
Nanao hetsika firaisankina ny AJM tamin'ny taona 2014 mba hanangom-bola hanampiana ny sarany amin'ny alalan'ny fanomezan'ny tsirairay. Nanatevin-daharana ny ezaka ihany koa ireo fikambanana sivily hafa, anisan'izany ny Tambajotra Nasionaly manohitra ny Fankahalana Pelaka sy Mpanova Taovam-pananahana (Transphobia) an'i Makedonia izay nikarakara hetsika fanangonam-bola tao amin'ny Tanàna Tranainy an'i Skopje. Tao anatin'ny folo andro latsaka dia nahavita nanangona ny ankamaroan'ny vola notakiana 9.000 Euro ho aloan'ireo mpanao gazety amin'i Sašo Mijalkov noho ny fahavoazana tsy ara-batana sy ny fandoavana ny fandaniana tamin'ny fitsarana izy ireo.
Ny pejy voalohan'ny gazetiboky Fokus tamin'ny 3 Oktobra 2014, mampiseho ny endrik'i Sasho Mijalkov sy ny hajia “voasivana.”
Samy voarohirohy tamina raharaha fitsarana maro mifandraika amin'ny fanararaotam-pahefana nandritra ny vanim-potoan'ny fisamboran'ny fanjakana izay nifarana tamin'ny taona 2017 i Mijalkov sy Gruevski, rehefa tsy nahavita nanangana governemanta maro an'isa taorian'ny fifidianana tamin'ny taona 2016 ny antoko politikam-bahoakan-dry zareo VMRO-DPMNE .
Voaheloka ho nanao kolikoly i Gruevski ary nandositra ny firenena tamin'ny taona 2018. Miafina tsy ho azon'ny lalàna any Hongria izy amin'izao fotoana izao, eo ambany fiarovan'ny mpiara-dia aminy ara-politika, ny praiminisitra Hongroà Viktor Orbán.
Voampanga amin'ny raharaham-pitsarana maro i Mijalkov amin'izao fotoana izao. Hatreto izy dia voaheloka sy voasazy higadra valo taona an-tranomaizina noho ny kolikoly tamina raharaha iray antsoina hoe Vault, ary 12 taona an-tranomaizina noho ny fanaraha-maso tsy ara-dalàna ireo olom-pirenena an'arivony tamin'ny raharaha Target sy Fortress. Nahazo fahafahana vonjimaika izy amin'izao fotoana izao rehefa nametraka antoka 11 tapitrisa euros.